Airbus ACJ320neo Aerospace Private Jet Aircraft Review na-elu nkasi obi ọhụrụ elu na-efe efe njem ọhụrụ horizons, site uru nke kasị oge a technology, ndị a saa mbara ụlọọrụ jets na-enye ahịa ikike ha dara oké ọnụ lifestyles na ha n'ebe ọ bụla ha na-aga mgbe njem na ịnya na a onwe ugboelu a na-ewere site na ụfọdụ na-kacha okomoko na njem. Otú ọ dị, e nwere ezigbo uru nọkwa na otu, i kwesịrị n'ezie imeli ya. Ezie na e nwere ụdị nile nke ụgbọ elu na-eji maka onwe ugboelu fleets, Airbus a na-ewere dị ka onye nke kasị mma ụgbọelu ụdị na azụmahịa.
Airbus, a ụlọ ọrụ na emewo ka aha maka innovations na aerospace technology, na-akpọpụta ya ọhụrụ ọgbọ nke ụgbọ elu kpọmkwem haziri maka ụlọọrụ na nzuzo ugboelu ojiji. Gụnyere a ọgbọ ọhụrụ nke ụgbọ elu bụ Airbus ACJ320neo. Nke a nyochaa ga-elerukwu anya na nke a ọhụrụ nlereanya na otú ọ na-anọchi anya ọdịnihu nke onwe jets.
Airbus ACJ Isi
Airbus na-arụ ọrụ na ha ọzọ ọgbọ nke jets kemgbe 2016. Ihe so ná ndị a mmelite bụ ha ukwuu ewu ewu Airbus Commercial Jet (ACJ) akara. Ha ACJ akara bụ nnọọ ewu na ndị na-azụ ha jets na na fleets na-ebu onwe ugboelu mgbazinye ọrụ. Ezie na ACJ pụtara ịbụ nnọọ ihe ịga nke ọma na ya Nchikota atụmatụ, arụmọrụ, na arụmọrụ, Airbus ka maara na a ka na-imeziwanye. Nke a rụpụtara na ntọhapụ nke ndị ACJneo, ọgbọ ọzọ nke Airbus azụmahịa jets, na January 2016.
The Airbus ACJ320neo bụ ngwaahịa nke Airbus si neo mmemme. Neo bụ n'ezie ihe acronym na-anọchi anya "ọhụrụ engine nhọrọ". Airbus mepụtara ọhụrụ engine nhọrọ maka ha azụmahịa ụgbọ elu dị ka A320. Ndị ọhụrụ engines nwere dị elu arụmọrụ mgbaru ọsọ: a 15 ka 20 percent mma mmanụ ụgbọala arụmọrụ, belata mkpọtụ, ma na ala umu anwuru. Na nkwa ndia, iwu maka "neo ụgbọ elu" bụ nnukwu-5200 nkeji, na-kpọmkwem. Itinye a ịma, Airbus akanyam gburugburu 7500 warara-ahu ugbo elu kemgbe 1988. Nyere ịdị ukwuu nke sales, na neo-anọchi anya ọdịnihu nke Airbus. Ọ nwere na-ebi ndụ ruo mama dị ka ọ bụ ugbu a bụ isi ego onye rụrụ maka ụlọ ọrụ.
Na mmepe nke ACJneo, Airbus anya ụzọ mee ka ha ụgbọ elu ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma karịa mgbe ọ bụla. The isi metric ụlọ ọrụ na-eji bụ "kwa njem oche mile" na-eri. Ọ na-ewere dị ka a ọtụtụ nke na-eri-irè nke na-arụ ọrụ ụgbọelu. The belata a na-eri bụ, na otú ịrụ ọrụ nke ọma ụgbọelu bụ. Iji nweta kasị ala kwa njem oche mile eri, Airbus mere nile di iche iche nke ndozi na engineering nke ACJneo. Mgbe Airbus tinye onye mesiri ike na arụmọrụ, ha mere otú enweghị na-achụ àjà nkasi obi, arụmọrụ, na ndị ọzọ na-achọsi ike atụmatụ maka jets. Ebe ndị a nke mma ga-etinye n'ime elekwasị anya mgbe e mesịrị.
Nyere ya dị mkpa na ọnọdụ na Airbus ngwaahịa akara, na ACJ320neo nwere na-ebi ndụ ruo mama na ndị ọzọ. The ezi ihe na-na mgbe na-ewere a nso anya, a ụgbọelu bụ ihe niile ọ na-mara na ... na mgbe ụfọdụ ndị ọzọ.
The n'ozuzu ike nke ụgbọelu nwere ike kere n'ime multiple metrics. Nke a n'ihe bụ ihu ọma dabere na esịtidem nhazi nke onye ụgbọelu. Akpa ike nwere ike kere n'ime 2 parameters: esịtidem ibu ikike, nke bụ ego nke ibu na ike ga-stowed n'ime mgbali / okpomọkụ achịkwa ogige nke ugbo elu, na mpụga ibu ikike, nke bụ ego nke ibu na ike ga-enweta site na mpụga nke ugbo elu.
N'agbanyeghị na Airbus ACJ320neo nwere dịghị mpụga ibu ikike, ọ na-eme ya maka ya na ya oke esịtidem ibu ikike. The esịtidem ibu ike nke ACJ320neo tụrụ na a ebu 976 cubic lita, na-eme ka ọ dị mfe nke kacha mma na ya na klas a, Atiya. The n'ozuzu aba ike nke a ụgbọelu bụ kpamkpam dabere na ụdị nke ime configurations ndị nwe ya chọrọ, ma ya ngwaahịa nhazi nwere ike inye ala aba 19 ndị mmadụ, nke bụ ihe karịrị ezuru kasị nzube.
Tụọ a ụgbọelu si payload, i nwere iji multiple nha metụtara ụgbọelu ibu, na ọnụ ọgụgụ nke ihe ọ pụrụ ibu, na ihe ndị yiri. The arụmọrụ arọ nke ụgbọelu bụ arọ nke ugbo elu gụnyere arụmọrụ arụ ọrụ, mkpa oke mmiri ndị dị otú ahụ dị ka mmanụ ụgbọala, na niile ọrụ ngwá chọrọ maka ụgbọ elu. The kacha takeoff na ọdịda ibu na-kọwaa dị ka ndị kacha ngụkọta nke ịdị arọ nke a n'ụzọ zuru ezu na juru n'ọnụ ugbo elu ebe takeoff na ọdịda nwere ike rụrụ n'enweghị. Bara uru ibu na a kọwara dị ka ego nke arọ na ụgbọelu nwere ike na-ebu mgbe arọ nke pilot, na ndi oru ugbo, na mmanụ ụgbọala na-wepụrụ.
Na usoro nke a payload atụmatụ, na nkwalite na Airbus ACJ320neo-arụ ọrụ nke ọma na ya na amara. Oke ọdịda ibu tụrụ na 148,592 pound, na kacha takeoff ibu tụrụ na 174,165 pound, nke dị elu karịa ọtụtụ n'ime ndị na ụgbọ elu na ya na klas. The arụmọrụ arọ nke a ụgbọelu tụrụ na 104,453 pound. Egbu, ndị bara uru payload nke a ụgbọelu tụrụ na 8,900 pound, nke nwere ike ada ukwuu, ma bụ budata elu karịa mpi. Na okwu nke payload nọmba, na ACJ320neo enwu.
Speed ​​bụ dabere na a dịgasị iche iche nke variables. Nke a bara uru bụ dabere na esịtidem atụmatụ dị ka engine ike na aerodynamic arụmọrụ, mgbe n'èzí ihe ndị dị ka ikuku ọkpụrụkpụ na headwind / tailwind ike sokwa. N'ihi na Airbus ACJ320neo, na ọnụ ọgụgụ na-ezo aka ụgbọelu na karịrị ike nke na-awụ ọsọ ọsọ. Ya kacha nrughari ọsọ tụrụ na 527 mph, ya nkezi nrughari ọsọ tụrụ na 527 mph, na ya ogologo nso ụgbọ ọsọ tụrụ na 514 mph. All ndị a ọnụ ọgụgụ aa umeala ndozi tụnyere yiri ụgbọ elu na ya na klas.
The iche iche nke a ụgbọelu bụ n'ihe nke otú anya a ụgbọelu nwere ike ịga njem eji a full tank nke manu. Nyere na otu ihe Airbus lekwasịrị anya n'oge mmepe nke Neo omume bụ mmanụ ụgbọala arụmọrụ, i nwere ike na-atụ anya nke a ụgbọelu na-enwu na na ngalaba ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ na-egosi ịrịba ndozi ikwu ya mpi. O doro anya na n'oge ule, niile mgbanwe ndị a na-arụ ọrụ, dapụtara n'ime nso ọgụgụ ga-adị mfe ịfụ efep mpi.
The tụrụ kacha nso nke Airbus ACJ320neo tụrụ na 7,099 kilomita, mgbe oche ndị na nso tụrụ na 7,021 kilomita. Oke nso ka akowara dika Ihe kachasịnụ ụgbọelu nwere ike ofufe na nrughari ọsọ na ezigbo elu, mgbe oche na nso a kọwara dị ka ndị kacha nso ụgbọelu nwere ike ofufe na kacha payload. Ihe nwoke na nha ewepụtara bụ budata elu tụnyere yiri jets, anapụta na nkwa na neo jets ga-Njirimara dịkarịa ala 20% mma mmanụ ụgbọala arụmọrụ tụnyere ha mpi.
Elu bụ ihe ọzọ arụmọrụ metric ejikarị iji chọpụta ụgbọelu ịrụ ọrụ ike. The elu nke elu ụgbọelu nwere ike ịga njem, mma ya ike bụ. N'otu oge ahụ, inwe ike njem na a elu elu onyinye ụfọdụ arụmọrụ na arụmọrụ uru. Na thinner ikuku ugbu na elu karị, ikuku na-eguzogide na ikpuru na-ebelata, n'ihi na elu njem gbapụrụ ọsọ na mma mmanụ ụgbọala arụmọrụ. atụghị anya, na ACJ320neo nwere a ọrụ n'uko nke 41,000 ụkwụ, nke bụ na-atụghị anya belata tụnyere yiri jets nwere ọrụ karị nke ruo 45,000 ụkwụ.
Runway ogologo bụ a set nke nha na chọpụta anya chọrọ maka ụgbọelu na gbapụ na zuru ọsọ na-eme ka a zuru nkwụsị na ọdịda. The ọdịda anya nke ACJ320neo tụrụ na 4,665 ụkwụ, nke pụtara na ọ na-achọrọ ogologo nke ubi mkpa ala ụgbọelu na nkezi ibu. The ezi ubi ogologo tụrụ na 5,820 ụkwụ, nke bụ n'ebe dị anya chọrọ iziga ụgbọelu na takeoff ọsọ na-eme ka ahụ a full stop. Ezie na e nwere ọtụtụ ihe ndị pụrụ imetụta ndị a runway ogologo ọgụgụ, ya nwere ike n'enweghị kwuru na ACJ320neo achọ ihe runway n'ogologo gbapụ na ala n'enweghị.
The Airbus ACJ320neo nwere a boatload nke ọhụrụ atụmatụ, aghọgbu tech ndozi mepụtara n'elu afọ nke ugbo elu ahụmahụ. The ACJ320neo, dị ka nke ọma dị ka ndị ọzọ azụmahịa ugboelu ụdị gụnyere ke neo mmemme, abịa ọkọlọtọ na ada site waya njikwa, elu avionics, na nso-boosting atụmatụ. Ọ na-abịa na a 90-ụkwụ ụlọ nwere ike ahaziri dị ka onye nwe mkpa na mmasị. Mgbe ndabara 19 oche-nhazi bụ ma comfy na dara oké ọnụ, Airbus nwere a myriad nke nhọrọ nke ga-enyere hazie jets dị ka onye nwe na-amasị.
The Airbus ACJ320neo Aviation, mgbe kama ịbụ a zuru okè ugboelu, na-anọchi anya ọdịnihu nke azụmahịa ugbo elu. Na ya ịrịba ndozi na mbepụ imewe, ọ na-anapụta arụmọrụ na arụmọrụ ọgụgụ na-eme ka ọ pụta ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ngwa ngwa, ọzọ mmanụ ụgbọala oru oma, na ndị ọzọ ike ibu ibu karịa ịnyịnya ibu karịa ya na ha dịkọrọ ndụ. Ndị a ndozi kpam kpam ka ihe ezi uche abụghị nanị maka onwe ugboelu nwe, ma n'ihi na ndị nwere mmasị na-ebiri. otu okomoko, mma arụmọrụ, ma na ala-akwụ ụgwọ: ihe ọzọ nwere ike a renter chọrọ na a onwe ugboelu mgbazinye? Airbus mere ya ọzọ.
Airbus acj320neo abụ olu ụtọ n'ime ime
Ọ dịghị Comments Ma.